Nicolas Anelka Oo Ku Boorinaya Kylian Mbappe Inuu Ka Tago Paris...
Nicolas Anelka Oo Ku Boorinaya Kylian Mbappe Inuu Ka Tago Paris…
Weeraryahankii hore ee Paris Saint-Germain iyo France Nicolas Anelka ayaa u sheegay Kylian Mbappe inuu u baahan doono inuu ka tago Garoonka Parc des Princes hadii uu doonayo inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu weyn.
22 jirkaan ayaan weli aqbalin inuu qandaraaska u kordhiyo Les Parisiens wixii ka dambeeya 2022, iyadoo Liverpool iyo Real Madrid ay sii wadaan xiisaha ay u qabaan.
Anelka ayaa matalay PSG laba jeer oo kala duwan – isagoo dhaliyay 19 gool 69 kulan oo uu u saftay kooxda – laakiin wuxuu aaminsan yahay in Mbappe ay tahay inuu u dhaqaaqo Premier League haddii uu doonayo Ballon d’Or.
Wararka Maanta : Horyaalka Soomaaliya oo xilligii loogu tala-galay aysan kooxna ku guuleysan...
42 jirkaan ayaa ku qoray wargayska The Athletic : “Waxaad haysataa ugu yaraan laba dookh – joogista Paris ama u dhaqaaq Real Madrid. Labadooduba way ku guuleysan karaan Champions League maalmahan. Markii aan joogay PSG, taasi may ahayn kiiska.
“Doorashadaas waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad ku guuleysato kubada cagta, hadii aad rabto abaalmarinta ugu weyn, waa inaad ka dhaqaaqdaa PSG waqti uun.
Wax walba oo aad ku sameyso Paris way fiicnaan doonaan, wax weyn ayaad u qabatay PSG Horyaalada ugu fiican waa England iyo Spain, marka ma aadan la tartamin ciyaartoyda ugu fiican. Horyaalka ugu fiican.
Wararka Maanta : Liverpool Oo Kala Xiriirtay Lazio Heshiiska Sergej Milinkovic-Savic
“Waa inaad go’aansataa, haddii aad rabto inaad ku guuleysato Ballon d’Or, sida Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi , waa inaad la tartanta kuwa ugu fiican.
“Marka, haddii aad rabto inaad ka mid noqoto kuwa ugu fiican, markaa samee waxa aad ku sameyso Paris laakiin ku samee Chelsea ama United ama Arsenal ama Manchester City ama Liverpool. Ama aad Spain aado Madrid ama Barcelona. Ama laga yaabee Italy. Markaas waan hadli karnaa ku saabsan saameyn caalami ah. ”
Wararka Maanta : Hordhac: Kulanka Italy Vs Spain Ee Euro 2020, Waqtiga La Ciyaarayo, Shaxda...
Mbappe wuxuu ku faana wadar ahaan 132 gool 171 kulan oo uu u saftay PSG, laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto Euro 2020 isagoo khasaariyay rigooradii ugu dambeysay ee kulankii Switzerland ee wareega 16ka.
Related Topics:CiyaarahaWararkaWararka CiyaarahaWararka Maantawararka maanta ciyaarahaWararka-maanta.net
Hordhac: Kulanka Italy Vs Spain Ee Euro 2020, Waqtiga La Ciyaarayo, Shaxda…
Kylian Mbappe Oo Diiday Dalabkii Ugu Dambeeyay Ee Paris Saint-Germain’
Faahfaahino kasoo baxaya madaafiic khasaare geystay oo lagu weeraray…
Thomas Tuchel Oo Doonaya Inuu Tiemoue Bakayoko Kusii Hayo Chelsea
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa lagu soo waramayaa inuu ka horjoogsaday Tiemoue Bakayoko qorshihii uu ugu dhaqaaqi lahaa AC Milan , iyadoo ciyaaryahanka reer France la siin doono fursad kale oo uu isku muujiyo Stamford Bridge.
26 jirkaan ayaa Blues kaga soo biiray Monaco sanadkii 2017 laakiin inta badan wuxuu ku dhibtooday inuu wacdarro dhigo kooxda ka dhisan Premier League, isagoo saftay kaliya 43 kulan.
Bakayoko ayaa amaah kula soo qaatay Milan, Monaco iyo Napoli seddexdii sano ee ugu danbeysay, waxaana la rumeysan yahay in kooxda San Siro ay dooneyso inay dib ula soo saxiixato inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Wararka Maanta : Chelsea Oo Xiriir La Sameysay Eduardo Camavinga
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa kaliya 12 bilood uga hartay inuu ku ordo qandaraaskiisa Stamford Bridge, laakiin sida laga soo xigtay TuttoMercatoWeb , Tuchel ayaa doonaya inuu xiddiga reer France ku sii hayo kooxda.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in tababaraha Chelsea uu doonayo inuu Bakayoko ka qeyb qaato isku diyaarinta kooxda xilli ciyaareedka soo socda isagoo doonaya inuu boos joogto ah ka helo kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Ciyaaryahankii hore ee Rennes ayaa dhaliyay labo gool isla markaana caawiye ka ahaa labo kale 44 kulan oo uu saftay intii uu amaahda ku joogay Napoli intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Arsenal Iyo Manchester United Oo Miisaamaya Dalabyada Samuel Umtiti
Kooxaha Arsenal iyo Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay labadooduba ka fikirayaan in ay dalab kagudbiyaan daafaca dhexe ee kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Ninka Faransiiska ah ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka iibsado suuqa haatan jira, iyadoo kooxda reer Catalan ay si aad ah isugu dayayaan inay yareeyaan miisaaniyadooda mushaarka.
Umtiti ayaa la rumeysan yahay inuu diiday fursad uu ku joojin lahaa heshiiskiisa Camp Nou si uu ugu helo lacag magdhow ah, laakiin daafaca ayaa weli dhaqaaqi kara xagaagan.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta Ardaygii lagu toogtay S/land, MD Farmaajo oo lagu haysto...
Arsenal iyo Man United ayaa labaduba baadi goob ugu jira daafac dhexe oo cusub ka hor xilli ciyaareedka soo socda, sida laga soo xigtay El Gol Digital , labada nin ayaa haatan miisaamaya dalabyada.
Umtiti ayaa la dhibtoonayay dhaawacyo seddexdii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay laakiin waxa uu ahaa ciyaaryahan muhiim u ah Barcelona labadii sano ee ugu horeysay ee uu la joogay kooxda reer Catalan.
27 jirkaan ayaa sidoo kale 31 kulan u saftay xulkiisa France wuxuuna qeyb ka ahaa kooxdii ku guuleysatay Koobkii Adduunka ee 2018 lagu qabtay Russia.
Tottenham Hotspur Oo Ogolaan Doonin Harry Kane Inuu Ka Tago Xagaagan
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inaysan u ogolaan doonin Harry Kane inuu ka tago kooxda xagaagan.
Kabtanka England ayaa ku wargaliyay Spurs inuu doonayo inuu raadsado koox cusub ka hor xilli ciyaareedka soo socda, Manchester City ayaa la rumeysan yahay inay diyaar u tahay inay 100 milyan oo ginni ku bixiso weeraryahankaan haatan jooga.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Manchester Evening News , Tottenham ayaa go’aansatay inaysan iibin 27 jirkaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Wararka Maanta : Cristiano Ronaldo Oo Gool Dhalinta Kaga Guuleysan Kara Patrick Czech Xili...
Manchester United ayaa sidoo kale lagu qiimeeyaa xiisaha Kane, kaasoo dhaliyay 33 gool isla markaana diiwaan geliyay 17 caawin 49 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Waqooyiga London xilli ciyaareedkii hore.
Weeraryahanka ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray in England ay gaarto finalka Euro 2020, isagoo shabaqa soo taabtay afar jeer lix kulan oo uu saftay, oo uu ku jiro guushii ay ka gaareen Denmark semi-finalka habeenkii Arbacada.
Kane ayaa loo maleynayaa inuu si gaar ah wali u doonayo inuu ka tago Tottenham Hotspur Stadium, laakiin wuxuu qandaraas kula jiraa kooxda caasimada ilaa June 2024, taasoo ka dhigeysa kooxda Nuno Espirito ay heysato fursad ay ku ceshan karto.
Chelsea Oo Xiriir La Sameysay Eduardo Camavinga
Kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Rennes ee Eduardo Camavinga inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Iyadoo hal sano ay uga hartay qandaraaskiisa, 18 jirkaan ayaa loo ogolaan doonaa inuu ka tago kooxda ka dhisan Ligue 1 toddobaadyada soo socda.
Inkastoo Manchester United si aad ah loola xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso ciyaaryahanka reer France, Rennes ayaa la sheegay inay meesha ka saartay soo jeedinno ku saabsan in hantidooda ugu qaalisan uu u dhaqaaqi doonoaan Old Trafford si ay u helaan qiimo jaban.
Wararka Maanta : Arsenal Iyo Manchester United Oo Miisaamaya Dalabyada Samuel Umtiti
Sida laga soo xigtay Le Parisien , Chelsea ayaa sameyn doonta tartan ku aadan saxiixa Camavinga iyadoo horeba xiriir toos ah ula sameysay kooxdiisa.
Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ayaa sidoo kale isha ku haya xaalada xidigan.
Raheem Sterling Oo U Furan Inuu Ka Tago Manchester City
Manchester City weeraryahanka Raheem Sterling ayaanan kasoo horjeedin in uu meel kale u dhaqaaqo xagaagan sida lagu sheegay warbixin.
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool ayaa door weyn ka ciyaaray England intii ay socdeen finalka Euro 2020, laakiin wuxuu ku dhibtooday inuu isku muujiyo Pep Guardiola intii lagu jiray dhamaadka xilli ciyaareedkii hore.
Sida laga soo xigtay The Athletic , haddii dalab ku habboon uu helo Sterling wuxuu tixgelin doonaa ka tagista Etihad xagaagan.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England uusan weli ku raaxeysan xiriirka Guardiola ka dib markii ay isku dheceen guga, laakiin qandaraaskiisa oo dhacaya 2023, waxay sameyn doonaan isku day ah inay ku xiraan heshiis cusub.
Wararka Maanta : Massimiliano Allegri Oo U Sheegay Juventus Inay Dib Ula Soo Saxiixato Paul...
Sterling wuxuu ku soo bilaabay dhamaan lixda kulan ee England ee Euro 2020 ilaa iyo haatan wuxuuna ku guuleystay rigooradii muranka dhalisay taasoo aakhirkii u horseeday Harry Kane goolkiisii ​​guusha ee Denmark ee semi-finalka.
Bayern Munich Oo Go’an Ka Gaartay Xidig Lala Xiriirinayo Kooxda Manchester…
Tababaraha cusub ee Bayern Munich Julian Nagelsmann ayaa amaan kala dul dhacay Leon Goretzka iyadoo ay jiraan soo jeedinno sheegaya in Manchester United ay dooneyso inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Heshiiska Goretzka ee haatan ee Allianz Arena ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, Man United ayaana loo maleynayaa inay u aqoonsatay 26 jirkaan ciyaaryahanka ugu fiican ee qadka dhexe ka xoojin kara ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, Naglesmann ayaa sheegay inuu doonayo ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka inuu la joogo kooxda ka ciyaarta Bundesliga “sanado badan”.
“Leon waa ciyaaryahan muhiim noo ah, waan ku farxi lahaa inaan la shaqeeyo sanado badan,” Nagelsmann ayaa u sheegay suxufiyiinta. Waxaan u maleynayaa inuu aad u sarreeyo isaga, waa mid ka mid ah qadka dhexe ee ugu halista badan adduunka, qof walba wuxuu jecel yahay inuu ku haysto kooxdooda ”.
Madaxa Bayern Oliver Kahn ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in wadahadalada heshiis kordhinta ah ee uu la joogo ninka reer Jarmal, kaasoo dhaliyay 25 gool isla markaana diiwaan galiyay 27 caawin 112 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa haatan.
Goretzka ayaa dhaliyay sideed jeer wuxuuna caawiyay sagaal caawin 32 kulan oo uu u saftay kooxda Der FCB xilli ciyaareedkii hore.